यस्तो शक्ति प्रचण्डलाई कहाँ बाट आयो ? यस्तो घोषणा गरे !
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। तीनवटा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनपछि मुलुकको प्रमुख शक्ति बन्ने घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको शनिबार सुरु भएको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको छ। ‘आगामी निर्वाचनसम्म पुग्दा माओवादी देशको प्रमुख शक्ति बन्ने सम्भावना छ’, दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
बैठकमा समसामयिक परिस्थितिबारे संक्षिप्त रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा दाहालले माओवादीको बलियो सांगठनिक संरचना नै मुलुकको प्रमुख शक्ति बन्ने आधार भएको तर्क गरेका थिए। उनले अहिले तीनवटा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको विषयलाई पनि आगामी निर्वाचनपछि प्रमुख शक्ति बन्ने आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा दाहालले पार्टीको राजनीतिक वैचारिक धार परिवर्तन गर्नेसमेत उल्लेख गरेका छन्। वर्तमान गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै आगामी निर्वाचनसम्म राजनीतिक वैचारिक धार बलियो बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको समेत औंल्याएका छन्। स्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। ‘बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भयो, सात प्रदेश र प्रवास गरी आठ प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच समूहगत रूपमा छलफल गरी सुझाव दिने कार्यक्रम छ’, केन्द्रीय सदस्य शिवबहादुर बस्नेतले भने। उनका अनुसार अध्यक्ष दाहालले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र सरकार सञ्चालनबारे धारणा राख्दै प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा माओवादी नेतृत्वले मुलुकको राजनीतिक पहलकदमी आफ्नो हातमा लिएको दाबी पनि गरिएको छ। अब उसले यसलाई संगठनात्मक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सोच बनाएको छ। ‘माओवादी कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दा उल्टिने र देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ।
त्यसैले अब परिवर्तनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने पहल माओवादीले लिनुपर्छ,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै बस्नेतले भने। दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध माओवादी केन्द्रले नै लडेको भन्दै गठबन्धन निर्माण गरेर केपी ओलीलाई घोडाबाट झार्ने काम पनि आफ्नो पार्टीले नै गरेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले बलियो भएका छौं भनेर ढुक्क हुन भने नमिल्ने बताए। ‘बलियो छौं भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन। परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने तत्वले गठबन्धन तोड्ने र पुरानै सरकार ल्याउन खोजेका छन्, हाम्रो काँधमा अहिले पनि जिम्मेवारी छ।
प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने र रोक्ने भूमिकालाई अलिकति पनि घट्न दिनु हुँदैन, प्रतिगमन रोक्ने यात्रा अघि बढाउनु छ। साथसाथै अभियानकै रूपमा संगठन र जनमत निर्माण गर्ने काम गर्न जरुरी छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।